गफगाफ/अन्तर्वार्ता :: NepalPlus
“समाजसेवा र राजनितिलाई सँगसँगै लान सकिन्छ ?” सापकोटा
मे १८, २०१४
राजनिति र समाजसेवामा चासो राख्ने युरोपका धेरै नेपाली बिच परिचित नाम हो, बेल्जियम निवासी सीता सापकोटा । त्यसो त, नेपाली कांग्रेसका उच्च नेता कोहि युरोप आए भने सम्झिने र खोज्ने थोरै नाम मध्येपनि एक हो सीता सापकोटा । राजनिति...
“युरो कांग्रेस लाहुरे दाईहरुको मनोरञ्जन गर्ने थलो” क्षेत्री / “युरो कांग्रेस युरोपभित्रका सबै कांग्रेसको साझा संस्था” गौतम
अप्रिल ३०, २०१४
नेपाली कांग्रेस देश भित्र जसरि बिभाजित छ, उसैगरि प्रवाशमापनि बिभाजित छ । पद र बिचारको लडाईका नाममा तानातान, खिचातानी र निषेधको राजनितिमा ब्यापक भिडन्त छ युरोप कांग्रेसमापनि । देउवा पक्ष र कोइराला पक्ष भनेर कोहि चिनिन चाहन्न...
नेपालका सबै गोही चिन्ने फ्रान्सेली सहयोगी
अक्टोबर १८, २०१३
उनको नाम धेरैले चिन्दैनन् । एकाध नेपाली होलान् उनलाई चिन्ने । तर नेपालका लागि उनले यति धेरै सहयोग गरेका छन् भन्ने सुन्दापनि धेरैलाई विश्वास गर्न गाह्रो पर्छ । एन्टोन काडि कति पटक नेपाल गए । उनैलाई सम्झना...
एनआरएनलाई धनीहरुको मात्र संस्था हुन नदिनका लागि नै मेरो उम्मेद्बारी हो- थापा
अक्टोबर १०, २०१३
रामप्रताप थापा एनआरएनको दुनियामा नयाँ नाम होइन । दस बर्ष अघी देखी संस्थाको उन्नती र प्रगतीमा निरन्तर लागिरहेका थापा यसका संस्थापक सदस्य मध्येका एक पनि हुन । एनआरएनको चौथो महाधिवेशनमा अध्यक्षका उम्मेद्वार बनेका थापाले त्यतिबेला संस्थामा बिभाजन...
सिक्ने होइन यीनीहरुबाट साथीहरु !
अक्टोबर ८, २०१३
तिन दशक लगातार संसद ? त्योपनि जनताले जिताएर ? के मन्त्र थियो उनीसित तिन दशक सांसद बन्न सक्ने ? के दिए जनतालाई कि एकै ब्यक्तिलाई त्यतिका वर्ष लगातार संसदमा जिताइराख्ने ? कुर्सीमा पुगेपछि बिलासी जिवनका रुखमाथि...
नेपालले बनाएका विश्वप्रसिद्द लेखक, विशेषज्ञ
सेप्टेम्बर २०, २०१३
पढे लेखेका, जाने बुझेका, उच्च शैक्षित हैशियत र विशेष योग्यता हाँसिल गरेका हामी नेपाली अवशर हेरिहेरि बिदेश भौंतारिईरहेका छौं। तर हाम्रै देशमा यस्सो घुम्न गएका बिदेशीहरुलाई भने हाम्रै देशले विशेषज्ञ बनाएर विश्वभरि चिन्ने बनाईदिएको छ । नाम,...
हामीले नेपालीलाई माया गर्ने, नेपालीचाहिँ टाढै बस्ने ?
सेप्टेम्बर १३, २०१३
यात्राका क्रममा पुगियो डेनमार्कको राजधानी कोपनहेगन । यूरोपका बिभिन्न मुलुकमा रहेका नेपालप्रेमीसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा भेटिईन ब्रिजिट नियल्सन् । उमेरले साँढे तिनबिस भन्दा बढि टेकेकि । तर जोश, जाँघर र हाउभाउ भने ठिमठिमाउँदै हिँड्ने अल्लारे उमेरकि । वातचित...
संविधान बन्दैन, बनेपनि अमान्य ?
जुलाइ २१, २०१३
फेसबुकमा जर्मनीबाट खबर पठाएछन्, लु महेन्द्र लावतिसितको प्रत्यक्ष प्रशारण सुन्नु र उहाँलाई केहि प्रश्न सोध्नुपर्‍यो भन्दै साथीहरुले । दिनभरि कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि साँझ फेरी फोन गरे दिपकजीले । बेलुका चराको आवाज सुन्दै जंगलको स्वच्छ हावा खान हिँडेका...
“मलाई षडयन्त्रपूर्ण ढंगले बाहुन क्षेत्री बिरोधीका रुपमा चित्रण गरियो” आङकाजी शेर्पा
मार्च १४, २०१३
जातिय पहिचान सहितको संघियताका मुद्दा जोडतोडले उठेपछि संभवत सबै भन्दा आलोचित र चर्चामा यिनै देखिए । त्यसैलेपनि उनीसित अन्तर्वार्ता लिने मन थियो । नेदरल्याण्डमा पार्टी गठन गरेर मध्य रात आङकाजी शेर्पा बेल्जियमस्थित कुल मगरको जापानी रेस्टुरेन्टमा फर्किँदा...
बाहुन, ब्राह्मणवाद र शासक बाहुन
मार्च ९, २०१३
● आङकाजी शेर्पा बाहुनबाद भनेको सर्व साधारणले बुझ्ने भाषामा भन्ने हो भने आफै मात्रै खाउँ । आफैं मात्रै लाउँ । सबै स्वार्थ आफैंमात्रै सिद्द गरौं । सबै नेत्रित्वमा आफैं मात्रै पुगौं । अर्थात् अरुको बारेमा पटक्कै नसोच्ने ।...